Vaovao - Milamina tsara ny fanondranana fitaovana fitsaboana any Shina amin'ny tapany voalohan'ny taona 2020
Tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2020, nisy valan'aretina pnemonia nanerana ny tany nanerana an'izao tontolo izao, ary niteraka fikorontanana mafy teo amin'ny varotra iraisam-pirenena sy ny toekarena manerantany. Voakasiky ny valanaretina io, ny varotra iraisampirenena dia nitohy nanjary kamo tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taona 2020, saingy ny fitomboana haingana amin'ny fanondranana fitaovana fitsaboana dia nanjary toerana mamirapiratra amin'ny varotra ivelany any amin'ny fireneko ary nitana andraikitra lehibe amin'ny fametrahana ny varotra ivelany.
Raha ny statistikan'ny fadintseranana any Shina dia 26.641 miliara dolara amerikana ny volan'ny fitaovana fampidirana sy fanondranana firenen'ny fireneko tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2020, fiakarana 2,98% isan-taona. Anisan'izany, ny fanondranana dia 16,313 miliara dolara amerikana, fiakarana 22,46% isan-taona; avy amin'ny tsena tokana, Etazonia, Hong Kong, Japon, Alemana ary Angletera no tsena fanondranana lehibe indrindra, miaraka amin'ny fanondranana mihoatra ny 7,5 miliara dolara amerikana, mitentina 46,08% amin'ny totalin'ny fanondranana. Anisan'ireo tsena fanondranana folo voalohany, ankoatra an'i Alemana, izay nihena ny tahan'ny fitomboana isan-taona, ny tsena hafa dia nitombo tamin'ny ambaratonga samihafa. Anisan'izany, Etazonia, Hong Kong, Sina, Angletera, Korea atsimo, Federasiona Rosiana ary Frantsa dia nitombo mihoatra ny isa avo roa heny isan-taona.
Tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2020, ny fanondranan'ny fireneko ny tsena nentim-paharazana dia niverina indray tamin'ny fomba rehetra, ary nitombo be ny fanondranana any amin'ny firenena BRICS sasany. ny fanondranan'ny fireneko an'i Eropa, Amerika Latina ary Amerika Avaratra dia nitombo 30,5%, 32,73% ary 14,77%. Raha ny fahitana ny tahan'ny fitomboan'ny fanondranana dia 368 tapitrisa dolara amerikana ny fanondranan'ny fireneko fitaovana any amin'ny federasiona rosiana, fiakarana 68,02% isan-taona, fiakarana lehibe indrindra.
Ho fanampin'ny tsena nentim-paharazana, tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny fireneko dia nanao ezaka lehibe hampiroborobo ny tsena vao misondrotra manaraka ny "Belt and Road". Tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taona 2020, ny fireneko dia nanondrana vokatra mitentina 3,841 miliara dolara amerikana amin'ireo firenena manamorona ny "Belt and Road", fiakarana 33,31% isan-taona.